“ရေနက်ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး လမ်းအကြမ်းခံနိုင်မယ့် Heavy Duty Truck ရှာနေသူတွေအတွက် Ford F150 2019”
F150 ဟာ ရေအနက်ထဲကို လက်မ (၃၀) ကျော်ကျော် ထိ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဖြတ်သန်းနေစဉ် စီးနင်းသူတွေ သက်သောင့်သက်သာရှိစေဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရေထဲ ဖြတ်မလား? လမ်းကြမ်းမောင်းမလား? ဘယ်နေရာကို မဆို သက်သောင့်သက်သာ ရှိရှိနဲ့ မောင်းနှင်စီးနင်းနိုင်မယ့် Ford ရဲ့ 2019 ထုတ် F150 ဟာ Heavy Duty Truck တွေထဲမှာ ထိပ်တန်းကရှိနေပါတယ်။ Robot Car ကို မောင်းနှင်နေတဲ့ Superhero တစ်ယောက်လို ခံစားရစေမယ့် Robotic Body Design အပြင် Luxury ဆန်ဆန် ကားအတွင်းခန်းကျယ်ကျယ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Off-Road ကားတစ်စီး ဆိုတဲ့ အလျောက် လမ်းကြမ်းမှာ မောင်းနှင်နေချိန်အတွင်း လွင့်စင်လာတဲ့ ကျောက်ခဲ၊သဲစတာတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင် ကားခေါင်းရှေ့အပြင်ပိုင်းကို အရည်သွေးမြင့်Steel Shieldတွေကိုသေချာတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လည်း Bumper တွေကို ပျားအုံပုံစံ ဇကာပေါက် design မျိုးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါသေးတယ်။ အင်ဂျင်ပိုင်းမှာဆိုရင် 3.5L V6 Twin Turbo Ecoboost ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် အရှိန်နဲ့ မောင်းနှင်မှုတွေအတွက် အင်ဂျင်ကို အားစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ အင်ဂျင်အားကောင်းကောင်းထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။F150 ရဲ့ Steering Wheel ဟာဆိုရင်လည်း လမ်းကြမ်းပေါ်မှာ ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်တဲ့အခါ ချောမွေ့မှုရှိပြီး ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာလုံခြုံမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်ဦးမှာပါ။
F150 ဟာ ရေအနက်ထဲကို လက်မ (၃၀) ကျော်ကျော် ထိ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဖြတ်သန်းနေစဉ် စီးနင်းသူတွေ သက်သောင့်သက်သာရှိစေဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လမ်းကြမ်းပိုင်းသာမကဘဲ ရေနက်နက်ကို ပါ ပြဿနာမရှိ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်အောင် Ford ရဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ Body Structure ကိုပါ တည်ဆောက်ပေးထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အကြမ်းခံနိုင်မယ့် Heavy Duty Truck တစ်စီးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေပါတယ်။
ဒါတွေအပြင်ယာဉ်မောင်းကို Assist လုပ်ပေးမယ့်အခြား Feature တွေကတော့အလိုအလျောက်အရေး
ပေါ်ဘရိတ်ပါတာ၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါ ရှေ့နောက်မှာ ယာဉ်ရှိ၊မရှိ ထောက်လှမ်းပေးတာ
လမ်းမျက်နှာပြင်စောင့်ကြည့်ပေးတာစတဲ့ Sensor System တွေနဲ့ လည်း ပံ့ပိုးပေးထားပါသေးတယ်။
အခုပြောပြပေးသွားတာတွေကတော့ Ford F150 ရဲ့ များလှစွာသော အဆင့်မြင့် Feature တွေထဲက off-road မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ အကြမ်းခံနိုင်မှုကို ပြောပြပေးသွားတာပါ။အတိုချုပ်ပြောရရင်
ပစ္စည်းများများတင်ပြီး ခရီးကြမ်းကြမ်းထွက်နေရတဲ့ ကားချစ်သူတွေအတွက်တော့ ဒီ Ford F150 2019 ဟာ ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ကားတစ်စီးအဖြစ်ရပ်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။